सुखद दाम्पत्य जीवनको लागि कुण्डली मिलनको अपरिहार्यता - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति : 14 February, 2019 3:02 pm
मानिस सामाजिक प्राणी हो । परिवार-परिवार मिलेर समाज बन्छ । पारिवारिक जीवनको पहिलो खुड्किलो नै विवाह हो । जब कुनै परिचित वा अपरिचित दुई नर-नारी विवाहको माध्यमले एउटा परिवारमा रुपान्तरित हुन्छन् । विवाहले ती दुई व्यक्तिहरूलाई मात्रै जोडने हो कि दुई परिवार र गाउँ समाज नै जोडिन पुग्छ । यस्तोमा वैवाहिक सम्बन्धले नयाँ नाता सम्बन्ध जोडिन पुगेका ती नर-नारी बिचको आपसी सम्बन्धले निर्धारण गर्छ कि ती दुई परिवार र गाँउसमाज बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरामा । यसैले हाम्रो समाजमा विवाहपूर्व विवाह योग्य उमेरका आफ्ना सन्तानको लागि वरबधुको खोजी गर्दै गर्दा यस्ता धेरै विषयहरूमा गहिरो सुझबुज र विचार विमर्शहरू गर्ने गरिन्छ । जस्तै सामाजिक पारिवारिक शारीरिक आर्थिक शैक्षिक मानसिक वैचारिक र अहिले त राजनैतिक सिद्धान्त र सम्बन्धहरूमाथि पनि विचार र बहस गरिन्छ कि पछि गएर कुनै नकारात्मक बहस वैमनश्यता वा असमञ्जयता उत्पन्न भएर पारिवारिक कलह र विखण्डन नहोस् भनेर । यसै गरेर हाम्रो समाजमा वैदिक तथा पौराणिक काल देखि चली आएको र वैदिक सनातन पूर्वीय दर्शन शास्त्रमा वेदको आँखा मानिएको ज्योतिषशास्त्रले विवाह योग्य उमेर भएका युवक युवतीहरू बिचमा विचार गर्नु पर्ने यस्ता धेरै तथ्य परक र प्रमाणित आधारहरू सहित फलित ज्योतिषमा कुण्डली मिलान अध्याय दिएको छ । जुन अति नै उपयोगी तथ्य परक र वैज्ञानिक पनि छ ।
विवाहको लागि कुण्डली मिलान गर्नु एउटा जिम्मेदारीपूर्ण कार्य हो । जसमा धेरै सुझबुजको आवश्यकता पर्छ । बोलाइने नामबाट नक्षत्र वा राशि निकालेर त्यसैको आधारमा तयारी सारिणी तालिकाबाट गुणांक निकालेर यदि १८ भन्दा कम गुण आयो भने विवाह अस्वीकृत गर्नु र १८ भन्दा ज्यादा गुण आएमा विवाहको लानि स्वीकृति दिइन्छ । यदि जन्म कुण्डली प्राप्त भएमा यो हेरिन्छ कि वरको कुण्डलीमा लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भावमा मङ्गलको उपस्थिति छ कि छैन । यदि मङ्गल यी भावहरूमा उपस्थिति छ भने अब कन्याको यही भावहरूमा मङ्गलको उपस्थिति हेरिन्छ । यदि यी भावहरूमा मङ्गलको उपस्थिति भएमा गुण-दोष छुट्टाउने गरिन्छ । मङ्गल बाहेक यदि यी भावहरू मध्ये कुनैमा शनि, राहु, केतु, सूर्य भएमा पनि गुण–दोष छुट्टाएर कुण्डली मिलेको घोषणा ५-१० मिनेटमा नै गरिदिन्छन् ।
कुण्डली मिलान गर्नु एउटा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो, यसलाई नामधारी ज्योतिषी दुई अपरिचित व्यक्तिहरूको भावी भाग्य एवं दाम्पत्य जीवनको फैसला गरिदिन्छन् । यो कस्तो विडम्बना हो कि हर एक पण्डित, कर्मकाण्डी, कथा वाचक, पुजारी, साधु एवं संन्यासी स्वयंको ज्योतिष कहलाएर हिँडेका छन् । यो भन्दा पनि दुर्भाग्यको कुरा यो छ कि हामी यस्ता तथाकथित ज्योतिषीहरूसँग आफ्नो भाग्यको निर्णय गर्न, मुहूर्त हेराउन तथा कुण्डली मिलान गराउन जान्छौँ । तथा यो नामधारी ज्योतिषी हाम्रो भाग्यको फैसला चुटकी बजाई-बजाई गरिदिन्छन् । यही कारण हो यिनीहरूसँग कुण्डली मिलान पछि गरिएको वैवाहिक जीवन सुखमय नभएको असङ्ख्य उदाहरण अगाडि आएका छन् । म यो भन्दिन कि पण्डित, कर्मकाण्डी कथा वाचक या पुजारीहरूमा पनि सबै ज्योतिषमा अनभिज्ञ नै हुन्छन् भनेर । यिनीहरूमा पनि केही ज्योतिष शास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका पनि छन् तर यो सङ्ख्या प्रतिशतको दृष्टिले ज्यादै कम छन् । ज्योतिषको राम्रो ज्ञान नभएका सङ्ख्या सर्वाधिक छ । मेरो विचारमा कुण्डली मिलान जस्तो उत्तरदायित्वपूर्ण काम ज्योतिषशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका विद्वानहरूबाट मात्रै गराउनु पर्छ । उनीहरूलाई यसमा विचार गर्ने अवसर पनि पुरा दिनुपर्छ । कुण्डली मिलान गर्ने काम कुनै बच्चाको खेल होइन, यो एउटा कठिन विषय हो, जसलाई धेरै सावधानीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ । नक्षत्र मिलानको साथ-साथै वर-बधूको कुण्डलीबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, भाग्य, आयु, चरित्र एवं प्रजनन क्षमता जस्ता कुराहरूको विचार अवश्य गर्नुपर्छ ।
जो कोहीसँग कुण्डली मिलान गर्नु पनि आजकाल ज्योतिष यस्तो मान्छेको हातमा पुगेको छ कि जसलाई ज्योतिषशास्त्रको यथार्थ जानकारी त के प्रारम्भिक कुराको पनि ठिक-ठिक सँग थाहा छैन । ज्योतिष शास्त्रसँग अनभिज्ञ ज्योतिषीहरूको सङ्ख्या हाम्रो देशमा धेरै छन् तर पनि पाँच प्रतिशत व्यक्ति ज्योतिषशास्त्रको आधिकारिक विद्वान छन् तर कुण्डली मिलान गराउनेहरूमा अधिकांश मानिसहरू ज्योतिष शास्त्रको पुरा जानकारी राख्दैनन् । जो मान्छे ज्योतिष शास्त्रको राम्रो जानकारी राख्ने विद्वानहरूकोमा सामान्य मानिस पुग्दैनन् या यस्तो विद्वानहरू आफ्नो स्तरबाट तल झरेर काम गर्दैनन् । यही कारणले कुण्डली मिलान जस्तो महत्त्वपूर्ण काम निम्नस्तरको ज्योतिषीद्वारा हुन जान्छ ।
कुण्डली मिलानको आवश्यकता किन ?
जब दुईवटा कुण्डली मिलानमा ग्रहहरूको उपर्युक्त साथमा भएमा प्रेम पनि हुन्छ र प्रेम विवाह पनि । ज्योतिषशास्त्रको अनुसार चन्द्रमा र शुक्र एक साथमा हुनु कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेम हुने र यदि यी दुई ग्रहको सप्तम स्थान वा सप्तमेससँग सम्बन्ध वा दृष्टि सम्बन्ध भएमा यो प्रेम विवाहमा परिणत हुन्छ । यो होइन की प्रारब्धलाई मान्दा कर्मफलको महत्त्वमा कमी हुन्छ तर यत्ति पक्का हो कि ग्रहहरूको संयोगले नै तपाईँको जीवनमा विग्रह र मिलनको योगको रचना गरेको रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रेम हुनुको पछाडि ज्योतिषीय कारणहरू पनि छ । कुण्डलीमा शुक्र र चन्द्रमाको प्रबलता भएमा कुनै पनि व्यक्तिको प्रेम सम्बन्ध स्थापना हुन स्वाभाविक हुन्छ । कुण्डलीमा पाँचौँ घर प्रेमको घर पनि हो र जब पञ्चमी र सप्तम् घरको सम्बन्ध हुन्छ तब प्रेम विवाहमा कायापल्ट हुन्छ । शुक्र या चन्द्रमाको अलावा वृष, तला र कर्कट राशिको जातकले पनि प्रेम विवाह गर्छन् । शुक्र र चन्द्रमाले प्रेम विवाह गराउँछ भने सूर्यको उपस्थितिले सम्बन्ध विच्छेदको कारक तत्त्व बन्छ । सूर्य र शुक्र या शनि आपसी सम्बन्ध जोड्नमा अलगै मुख्य भूमिका निभाउँछ । सप्तम भावको सम्बन्ध यदि सूर्यसँग भएमा पनि युवा अवस्था प्रेमी-प्रेमिकाको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिक्दैन । यिनीहरूको युक्ति सम्बन्ध विच्छेद सम्म गराउँछ । यदि राम्रोसँग आँखा खोलेर कुण्डली हेरियो भने शुक्र तथा चन्द्रमाको भएमा तपाईँहरूको आपसी प्रेम दीर्घ हुन्छ ।
प्रायः सबै माता-पिता यो चाहना गर्नु हुन्छ कि आफ्ना छोरा-छोरीको विवाह भएपछि उनीहरूको जीवन सुखमय एवं सौहार्दपूर्ण होस । दुईजनामा वैचारिक मतभेद नहोस् र उनीहरूले प्रगति गरुँन् । तर विवाहपछि पति-पत्नीको बिचमा क्लेश र विवाद सुरु भयो र यो कुरा सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्यो भने यो विचारणीय विषय हो । विवाह पछि यदि दाम्पत्य सुख नमिले या पति-पत्नी बिचको मतभेद जीवनपर्यन्त चलिरह्यो, आपसी समञ्जयताको अभाव भयो भने यसको ज्योतिषीय कारण कुण्डलीमा कुनै बाधक योग हुनसक्छ । किनभने बाधक योग भएर नै पति-पत्नीको बिचमा वैचारिक मतभेद हुन्छ र नै उनीहरूमा आपसी एकार्का प्रतिको भावनात्मक निकटता कम हुनसक्छ । यदि यस्तो स्थिति छ भने पनि भयभीत हुनुपर्दैन, यस बाधक योगको पनि उपचार गरेर प्रतिकुल प्रभावहरूलाई कम गर्न सकिन्छ । दाम्पत्य सुखमा बाधक योग के हो र यसबाट छुटकारा पाउन ज्योतिषशास्त्रमा के बताएको छ त्यसलाई बुझ्नु पर्छ । विवाह हाम्रो संस्कृति र समाजमा एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार हो । भनिन्छ, कि जोडी संयोगले बाँधिन्छ जुन परमात्माद्वारा पहिले नै तय भएको हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि राम्री पति या पत्नी र राम्रो सन्तान भाग्यले नै पाइन्छ । पूर्वजन्मको कर्मको फल अनुसार नै जीवनसाथी पाइन्छ । यदि सु-कर्म अधिक भएमा वैवाहिक जीवन सुखमय, र कु-कर्म अधिक भएमा वैवाहिक जीवन दुःखमय हुन्छ । जन्मकुण्डलीमा विवाहको विचार सप्तम भावकाट गरिन्छ, यो भावबाट पति एवं पत्नी, काम(भोग विलास) विवाह पहिले र पश्चात्को यौन सम्बन्ध, साझेदारी आदिको विचार मुख्यरुपमा गरिन्छ ।
–जन्म कुण्डलीमा ६, ८, १२ भावहरूलाई अशुभ मानिन्छ । सूर्य, मङ्गल, शनि, राहु-केतु लाई क्रूर ग्रह मानिन्छ । यिनीहरूको अशुभ स्थिति हुनाले दाम्पत्य जीवनमा सुखको कमी आउँछ ।
–सप्तमाधिपति द्वादश भावमा छ र राहु लग्नमा भएमा वैवाहिक सुखमा बाधा हुने सम्भावना हुन्छ ।
–सप्तम भावस्थ राहु यति द्वादशाधिपतिबाट वैवाहिक सुखमा कमी हुने सम्भावना हुन्छ । द्वादशस्थ सप्तमाधिपति र सप्तमस्थ द्वादशाधिपतिसँग यदि राहुको युति भएमा दाम्पत्य सुखमा कमीको साथै सम्बन्ध विच्छेदसम्मको स्थिति उत्पन्न गराउँछ ।
–लग्नमा स्थित शनि-राहुले पनि दाम्पत्य सुखमा कमी गराउँछ ।
–सप्तमेश यदि षष्टम, अष्ठम, द्वादशम भावमा भएमा पनि वैवाहिक सुखमा कमीको सम्भावना हुन्छ ।
–षष्ठेशको सम्बन्ध यदि द्वितीय, सप्तमभाव, द्वितीयाधिपति, सप्तमाधिपति अथवा शुक्र सँग छ भने दाम्पत्य जीवनको आनन्दमा बाधा हुन्छ ।
–षष्ठभाव न्यायालयको पनि भाव भएकोले सप्तमेश षष्ठेशको साथमा षष्ठ भावमा छ या षष्ठेश, सप्तमेश र शुक्रको युति भएमा पति-पत्नी बिचमा न्यायिक सङ्घर्ष हुने सम्भावना हुन्छ ।
–यदि विवाह भन्दा पूर्व कुण्डली मिलान गरेर उपरोक्त दोषहरूको निवारण गरे पश्चात् विवाह गरिएको हो भने दाम्पत्य सुखमा कमी हुन्दैन । कसैको कुण्डलीमा कुन ग्रहको कारणले दाम्पत्य सुखमा कमी ल्याई रहेको छ । यसको लागि कुनै विशेषज्ञको सल्लाह लिनु पर्छ ।
विवाह योगको लागि जुन मुख्य कारक हुन्छ ती यस प्रकार छ ,
–सप्तम भावको स्वामी खराब छ वा सही छ, त्यो आफ्नो भावमा बसेको छ की या कुनै अन्य स्थानमा बसेर आफ्नो भावलाई देखिरहेको छ की । सप्तमभावमा कुनै अन्य पाप ग्रहहरुको दृष्टि त परेको छैन ? कुनै पाप ग्रह सप्तम भावमा त बसेको छैन ? यदि सप्तम भावमा सम राशि छ । सप्तमेश र शुक्र सम राशीमा छ । सप्तमेश बली छ । सप्तमभावमा कुनै ग्रह छैन । कुनै पाप ग्रहको दृष्टि सप्तम भाव र सप्तमेशमा छैन । द्वितीय, सप्तम र द्वादश भावको स्वामी केन्द्र वा त्रिकोणमा छ, र गुरुको दृष्टि छ । सप्तमेशको स्थितिभन्दा अगाडिको भावमा या सप्तमभावमा कुनै क्रूर ग्रह त छैन ?
यदि यस्तो भएमा विवाह हुदैन
सप्तमेश शुभस्थानमा छैन । सप्तमेश षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थानमा अस्त भएर बसेको भएमा । सप्तमेश नीच राशीमा छ । सप्तमेश द्वादशस्थानमा छ र लग्नेश या राशीस्वामी सप्तमस्थानमा छ । चन्द्र शुक्रसाथमा छ, त्यसको सप्तमस्थानमा मंगल र शनि विराजमान छ । शुक्र र मङ्गल दुवै सप्तम स्थानमा छ । शुक्र र मङ्गल दुवै पञ्चम् या नवम् भावमा छ । शुक्र कुनै पाप ग्रहको साथमा पञ्चम् या नवम् भावमा छ । शुक्र, बुध र शनि तीनै ग्रह नीचको छ । पञ्चम्भावमा चन्द्रमा छ, सप्तम् या द्वादश् भावमा दुई वा दुई भन्दा धेरै पापग्रह छ । सूर्य स्पष्ट र सप्तमेश स्पष्ट बराबर छ ।
सप्तमभावमा शुक्र र बुध दुवै ग्रह भएमा विवाहको कुरा त चलिरहे पनि विवाह भने आधि उमेर ढल्के पछि मात्रै हुन्छ ।
4 July, 2020 12:00 pm
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको र